Galitsky पार्क र कसरी ड्राइभ गर्ने?
Giliis पार्टनर विवरण
krasnoder: व्यवसाय, ट्रान्जिट, आकर्षणहरू
Krasnodar होटलहरू व्यापार ट्रिपहरूको लागि
करास्नोडर क्षेत्र सही रूपमा देशमा सब भन्दा सुन्दर र फूलेको संख्यामा समावेश गर्न सकिन्छ। र यदि पर्यटकहरू सुन्दर मूत्र प्रकृतिको प्रशंसा गर्न चाहँदैनन्, तर रमाईलो पनि, त्यसपछि तिनीहरूले Krasnondar मा grantsky पार्क भ्रमण गर्न पर्छ। यो जवान ल्यान्डमार्कले यसको विचारशील पूर्वाधारको साथ महान लोकप्रियता र मनोरन्जनको प्रशस्तता जितेको छ। उनको भ्रमणले विभिन्न युगको पाहुनाहरूको लागि चमककारी प्रभावहरूको ग्यारेन्टी दिन्छ। तल पार्क पार्कमा विस्तृत जानकारी र मुख्य पर्यटक वस्तुहरूको एक सिंहावलोकन।
P> P> कोषले प्रख्यात किरासोडोर उन्मूली उन्गानेल गीतिटरी गीजस्कीलाई छुट्यायो। उनी एफसी कृष्णदार माथितिर हिँडे, शहरको मानद एक हो। र 201 2018 सम्म ग्यालिटकी म्याग्नेट स्टोरहरूको प्रसिद्ध नेटवर्कको सह-मालिक थियो। उद्यमी आफैं डुचीमा जन्म भएको थियो र अर्मेदको जरा छ। 201 2019 देखि, उनी आफ्नै ब्रान्ड अन्तर्गत भिन्टेज वाइन इन्टिज मजदूरमा व्यस्त छन्: व्यवसाय आफ्नी श्रीमतीको भाइसँग मिल्दोजुल्दो छ।
गाउँकाकी पार्क अहिले रसियाको सब भन्दा चाखलाग्दो र असामान्य डिजाइन अंकहरू मध्ये एक हो। यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि हजारौं पर्यटक यहाँ आउँछन्। अन्तरिक्ष जत्तिकै संगठित गरिएको छ कि ठाउँहरू ग्रीष्म in तुमा पनि सबैको लागि पर्याप्त छन्, सबैभन्दा बढी पर्यटन गतिविधिको बखत। पार्क निरन्तर निरन्तर सुधार र रूपान्तरण, नयाँ प्लान्टन्स र वस्तुहरू देखा पर्दै छ, डिजाइन तत्वहरू परिवर्तन हुन्छन्। त्यसोभए यहाँ एक पटक जानुहोस्: यो ठाउँ आउँदैन। र पक्कै पनि तपाईंले यसलाई बर्ष र दिनको विभिन्न समयमा भ्रमण गर्नु आवश्यक छ।
पाहुनाहरूको लागि सब भन्दा आकर्षक सुविधाहरू मध्ये एक व्यापक एम्फीथिकर हो, 200 आगन्तुकहरूको लागि डिजाइन गरिएको। फिल्म छविहरू, प्रदर्शनहरू, स्टेजिंग, कन्सर्टहरू यहाँ राखिन्छन्। खेल प्रेमीहरू खुशीको खेल स्पीडहरू प्रयोग गर्छन्। दृश्यलाई हेर्नुहोस् दर्शकहरूको परिवर्धकमा धेरै सुविधाजनक छ। यहाँ पनि फोटोको किनारहरूको साथ सन्तुष्ट हुन्छ।
पार्कको एक विशेष अवलोकन डेकबाट सुविधाजनक डिजाईन प्रशंसनीय छ, जुन लामो समयसम्म आरोहण सर्पिल हो। कृत्रिम उचाइको शीर्षमा मनोरञ्जनको ठाउँले सुसज्जित हुन्छ, जहाँबाट तपाईं क्षेत्र अन्वेषण गरेर सुन्दर फोटोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। नेतृत्वको आँधी र कृत्रिम झरनाका साथ नजिकैको पानी लबी हो। विशेष गरी ऊ बच्चाहरूलाई मनपर्दछ, तर वयस्कहरूले केही मिनेट खर्च गरे, पानी खेल हेर्दै। बेलुका वस्तुको प्रशंसा गर्न उत्तम हुन्छ।
पार्क लियोडोवोरको ठेगाना सडकमा रहेको शहरको केन्द्रमा अवस्थित छ, एक घर 1. सामान्य टोसोभ र पूर्वी कार्पस्कायाको सडकमा मार्ग योजनाहरू। पार्कको आधुनिक कम्लामा फुटबल टीमका फुटनोलको फुटबल टीमसँग परिचित आधुनिक स्टेडियमसँग नजिकबाट जोडिएको थियो र नयाँ पार्कमा पुग्छ यो स्टेडियमलाई नाम दिन सम्भव थियो।
Stadium को छेउमा 1 1800 कार पार्क एक व्यक्तिगत कार मा यात्रा को लागी एक सहज कार पार्क हो र पार्क को लागी। सार्वजनिक यातायात मा पार्क को लागी सजिलैसँग पहुँच योग्य हुन सक्छ।
युवा आगन्तुकहरूको लागि, पार्क पनि धेरै चाखलाग्दो हुनेछ, किनकि यसमा धेरै रोचक ठाउँहरू छन्:
Krasnodar मा भइरहेको, तपाइँले पछिल्लो छुट्टी को लागी सबैभन्दा राम्रो स्थान को रूप मा grititsky पार्क भ्रमण गर्न सक्षम हुनु पर्छ। आरामदायी कोठा बुकिंगको लागि होटेल जस्तै। सेवाको उत्कृष्ट स्तर, रातो शाहीलाई ध्यान दिनुहोस्, जुन मध्यम मूल्य र राम्रो सेवाको संयोजन गर्दै। साइटमा विवरणहरू:
<< p> शहरमा कुनै विशेष ऐतिहासिक दृश्यहरू छैनन्, तर क्रासोडारको केन्द्र राम्रोसँग परिदृश्य भएको छ र यहाँ हेर्न केहि छ। पर्यटन वस्तुहरूको बुच स्ट्रिट रेडरको वरिपरि स collected ्कलन गरिएको छ: पार्क, स्क्वायर एली, धेरै शहरी क्षेत्रहरू, कला र वास्तुकलाहरू ।
छिमेकी शहर र क्षेत्रबाट पर्यटकहरू प्रायः कन्सर्टहरू र फुटबल खेलको लागि शहरमा आउँदछन्। भ्रमणका लागि अनिवार्य एफसी क्रासोडार र फुटबल क्लबको सेनाले सिर्जना गरेको एफसी क्रासनोडरको स्टेडियमको स्टेडियम र पार्टबेलको पारित गरिएको छ, जुन फुटबल क्लबको सेनाले सिर्जना गरेको छ। सर्वाधिक गीतिजकी।
त्यस्ता अवधिहरूमा विभिन्न कोठाको विभिन्न प्रकारहरू फेला पार्नु धेरै गाह्रो छ। यसका पाहुनाहरूका लागि, एक्सपोरेन्सर सबै प्रमुख होटेलबाट स्थानान्तरण गर्दछ। बाँकी सबै महत्वपूर्ण कम्पनीहरू केन्द्रमा अवस्थित छन्। धेरै Krasnodordar होटेल व्यापार पर्यटकहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो, यसले कोठा प्रति कोठाको मूल्यलाई असर गर्दछ। कम लागत निजी होटेल वा अपार्टमेन्ट खर्च हुनेछ।
द्वारा पारित गर्नका लागि:
Krasnodar पर्यटकको ध्यान केन्द्रित शेयर - कालो समुद्री किनार तिर यात्रा गर्दै र यसबाट यात्रा गर्दै। नजिकको समुद्री किनार गाउँ (DZHUBUGI) 1.5-2 घण्टा हो, सब भन्दा टाढाको (एडलर) को सडक -7--7 घण्टा लिनेछ। प्रायजसो शहरका होटेलमा नजिकैको बस्तीका बासिन्दाहरूबाट प्रस्थान र पछाडि बस्छन्।
Pashkovsky एयरपोर्ट शहरको उही क्षेत्रमा अवस्थित छ। त्यहाँ संघीय मार्ग पनि छ। Pashocovsky जिल्लाले करासुस्की जिल्लालाई जनाउँछ। ठूला नेटवर्क होटलहरू लगभग होइनन्, तर तपाईं एक निजी होटेलमा कोठा बुक गर्न सक्नुहुनेछ, शहरको कुनै अभाव छैन। रेलवे र बस स्टेशनहरू केन्द्रीय जिल्लामा अवस्थित छन्। सान्त्वना र लागतको कुनै पनि स्तर को संख्या फेला पार्न सजिलो छ।